प्रशिक्षणमा फर्किए मेसी, बार्सिलोनाको पहिलो खेल कहिले ? – Everest Dainik – News from Nepal
प्रशिक्षणमा फर्किए मेसी, बार्सिलोनाको पहिलो खेल कहिले ?
एजेन्सी, साउन १६ । रसियामा हालै सम्पन्न विश्वकप फुटबलपछि लामो समय छुट्टीमा रहेका अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेसी बार्सिलोना फर्किएका छन्। विश्वकपमा नकआउट चरणको पहिलो खेलबाटै बाहिरिएका उनी करिब एक महिनाको बिदापछि क्लबको प्रशिक्षणमा फर्किएका हुन्। उनले हिजो (मंगलबार) मेडिकल गरेपछि प्रशिक्षण थालेका छन्।
मेसीसँगै स्पेनका जोर्डी अल्बा, जेरार्ड पिके र सर्जियो बुस्क्वेटस् समेत विदा पछि बार्सिलोना फर्किएका छन्। प्रि-सिजन टुरका लागि अमेरिकामा रहेको बार्सिलोना मेस्सी, पिके, अल्बा र बुक्वेट्स बिनै खेलिरहेको छ।
आगामी १२ अगस्टमा हुने सेभिल्ला विरुद्धको स्पेनिस सुपरकपका लागि भन्दै मेसीसहितका खेलाडीले तयारी थालेका छन्। लागिगा अन्तर्रगत बार्सिलोनाले १८ अगस्टमा घरेलु मैदान नाउ क्याम्पमा आल्भेसविरुद्ध पहिलो खेल खेल्दै लिगको सुरूवात गर्नेछ।
ट्याग्स: Laa liga, Leonal Messi